မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: MMITPROS SG Oct Meet-up
အရင်တစ်ပတ်စနေက မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်မင်ဘာတွေ gathering လုပ်တုန်းကတော့ အချစ်စမ်းတဲ့လူတစ်စုကြောင့် မသွားဖြစ်လိုက်ဘူး။ဒီနေ့တော့ MyanmarIT Pros SG ရဲ့ October Meet-up ကတော့ East Coast မှာညနေက လုပ်ဖြစ်တာ မဖြစ်မနေသွားလိုက်တယ်။ ပြောဖြစ်တာ ဆွေးနွေးဖြစ်တာတွေက အများကြီးဗဟုသုတရပါတယ်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ကြ အတွေ့အကြုံတွေ ပညာတွေဖလှယ်ကြ အပြန်အလှန်ရင်းနှီးကြပေါ့နော်။MrDBA ကတော့ မနက်ကပဲ ရန်ကုန်ပြန်သွားလို့ ဒီနေ့ပွဲမှာ မတွေ့လိုက်ရတော့ဘူး။ လူဟောင်း ၅ယောက်လောက်ပဲပါပြီး ကျန်တာ လူသစ်တွေမို့ ၀မ်းသာစရာပါပဲ။ လူဟောင်းတွေဒီထက်ပိုပါနိုင်ရင်တော့ ပိုဝမ်းသာမှာပေါ့။ ဂျပန်ကနေ အိုကိစံဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်လဲ ည ၁၁ခွဲ လေယာဉ်နဲ့ ဂျပန်မပြန်ခင် အပြေးအလွှား လာရောက်တွေ့ဆုံသွားတဲ့အပြင် လက်ဆောင်ပါပေးသွားသေးသမို့ ပျော်၏။ ည ၁၀နာရီမှ အိမ်ကို အမောတကော ပြန်ရောက်လာတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်း အွန်လိုင်းတက်တာနဲ့ မေးလ်စစ်တော့ ဓာတ်ပုံလေးရလို့ ချက်ချင်းတင်လိုက်ပါတယ်။ သိုင်းခရု organizer ကိုဂျွန်မိုးရေ၊ အကျွေးအမွေးအစီအစဉ်အတွက် အပင်ပန်းခံပေးတဲ့ မဒမ်ဂျွန်မိုးရောဗျို
Gathering တွေလုပ်လှချည့်လား.. ကိုယ်တောင်နောက်ကျနေပြီ.. အမှီလိုက်မှ.. ဟီး.. ဟီး..
What would be the next gathering? facebook gathering? twitter gathering?
>>mabaydar, အမီလိုက်ပါနဲ့ အတူတူပဲဟာပဲဟာကို :P>>steve, next gathering is not facebook gathering. but I want to getachance of face to face gathering with u. heehe :P